FAO oo taageereysa kaluumeysatada Banaadir & hareeraheeda – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wasiirka Kheyraadka iyo kalluumaysiga badda ee Xukuumadda Soomaaliya, Maxamuud Colow Barrow oo qaabilay xubno ka socda hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan cunada iyo beeraha ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan FAO ayaa kala hadlay sidii ay gacan uga geysan lahaayeen horumarinta kheyraadka dalka, gaar ahaan wax soo saarka dalagga beeraha iyo kalluunka.
Wasiirka Kalluumeysiga oo markii uu soo idlaaday kulanka kaddib la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in wafdiga ka socda Hay’adda FOA ay isla meel dhigeen horumarinta kheyraadka dalka iyo doorka uga aadan ka qeyb qaadashada arrintaaasi iyo dhiiri gelinta dadka beeraleyda iyo kuwa kalluumeysata ah, si ay u siiyan tababaro kor loogu qaadayo xirfaddooda.
“Hay’adda FAO waxa ay diyaar u tahay in ay diyaariso saddex qaboojiye oo ay dhigayaan Muqdisho iyo hareeraheeda si kalluunka loogu keydiyo, waxaana shirkadaha ku saacideynaa inay ku tartamaan dhisidda saddexdaasi qaboojiye oo laga hirgelin doono dhanka xeebaha, tan kale waxaan tababaro u qabaneynaa kalluumeysatada dalka” ayuu yiri Wasiirka Kalluumeysiga.
Mas’uuliyiinta hay’adda FAO ee maanta kulanka la qaatay wasiirka Kalluumeysiga iyo Kheyraadka dalka ayaa waxa ay dhankooda balan qaadeen horumarinta kheyraadka dalka, ayna dhiiri gelinayaan beeraleyda iyo kallumeystada dalka.
Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka dalka ayaa dadaal ugu jirta sidii loo horumarin lahaa wax soo saarka kheyraadka dalka Soomaaliya.